Yenza umzi-mveliso kunye ne-OEM / uMvelisi weCosmetics weCosmetics | I-backne ye-banni
I-Banffee Makeup-Ifektri yokwenza iNgcali& Umenzi weZithambiso ezilungiselelweyo
Iimveliso ze-fandeup zobuso
I-Vip Glosss yeTloyitha
YIMA UZONWABELE UBUHLE BAKHO
Vumela i-Banffee Makeup isasazeke kuzo zonke iikona zehlabathi! Siyi-OEM yobuchwephesha kunye noMenzi wezinto zokuthambisa we-ODM.
I-Banffee Makeup yingcaliumzi-mveliso wokwenza kunye nomvelisi weemveliso zokuthambisa e-China kuzo zonke iintlobo zezithambiso zamehlo, izithambiso zobuso kunye nezithambiso zomlomo. Iimveliso zethu eziphambili ziquka i-lipstick, i-eyeshadow palettes, i-eyeliners, isiseko, i-powder ecinezelweyo, i-highlighter.& ibronzer, njl.
iI-Banffee Makeup ngabavelisi bezithambiso zehoseyile ezinezithambiso zethu zohlobo lwentengiso kwaye zibonelela ngenkonzo ye-OEM/ODM.
Siyi-OEM yobungcali& ODM umenzi we-makeup, ebeka uphando kunye nophuhliso, imveliso kunye nokuthengisa kwelinye. Sinegama elihle lezixhobo zethu eziphambili, iqela lokuthengisa lobuchwephesha, iR& Iqela le-D iminyaka engaphezu kwe-10, ukunikezelwa kwezixhobo ezivela kulo lonke ihlabathi. I-Banffee Makeup ibonelela ngenkonzo yesiko lobuchwephesha kuzo zonke iintlobo zeemveliso zokuthambisa. Ukuba ujonge izinto zokuthambisa OEM umenzi, qhagamshelana nathi.
Umbuzo:Abathengi baxelela ifom yefom efunwayo, iinkcukacha zokusebenza, umjikelo wobomi, kunye neemfuno zokuthotyelwa.
Uyilo: Iqela lokuyila libandakanyeka kwasekuqaleni kweprojekthi ukuqinisekisa ukuba iimveliso ezilungiselelwe isiko zilungele iimfuno zabathengi.
Ulawulo loMgangatho: Ukuze sinikezele ngezakhiwo ezikumgangatho ophezulu, sigcina i-esebenzayo& Inkqubo yoLawulo loMgangatho esebenzayo.
I-Banffee Makeup ibonelela ngezisombululo zokuphela kweempawu zokuqalisa: zibonelela ngothotho olupheleleyo lweenkonzo zokwenza ngokwezifiso ezifana noyilo lwebrendi, uyilo lokupakishwa kwemveliso, uhlalutyo lokubeka indawo yentengiso yentengiso, uphuhliso lwemveliso kunye nemveliso, uqeqesho lokuthengisa imveliso, njl.
Njengomzi mveliso / umenzi oneminyaka eyi-16 yamava, I-Banffee Makeup iyakwazi ukubonelela ngezithambiso ezikumgangatho ophezulu ngexabiso elikhuphisanayo.
Iminyaka eyi-16 yamava
Iimveliso azithandwa kuphela ngabathengi basekhaya, kodwa zithunyelwa kumazwe angaphandle kuMzantsi-mpuma Asia, kuMbindi Mpuma, Afrika, Ea...
Sinegama elihle lezixhobo zethu eziphucukileyo, iqela lokuthengisa elichwepheshile.
Inkonzo yokumisa enye
I-Banffee inokubonelela ngefomula elungiselelweyo, iipakethi ezilungiselelweyo, uyilo lwasimahla, inkonzo yokuthumela ngenqanawa kunye nenkonzo emva kokuthengisa...
Inkohlakalo free& inyama yezilwanyana
Roduct series ziquka eyeshadow, lipstick, lipgloss, umlomo womlomo, ishiya, eyeliner, mascara, isiseko, highlighter, c...
Guangzhou Banffee Cosmetics Co., Ltd. yasekwa ngo-2015. Ikomkhulu layo kunye ne-R&Isiseko se-D siseJianggao Town Industrial Park, kwiSithili saseBaiyun, kwisiXeko saseGuangzhou, esinommandla otyebileyo wenkcubeko. Inkampani igxininise kuphuhliso, uyilo, imveliso, intengiso kunye nokubonelela ngezithambiso ezikumgangatho ophezulu, umzi-mveliso odityanisiweyo kunye nomenzi wezithambiso ezenziwe ngokwezifiso.
Emva kweminyaka esi-7 yophuhliso, i-Banffee Makeup ifumene i-ISO22716, i-GMP, i-SGS, izatifikethi ze-FDA, kwaye ineqela lophando lobuchwephesha kunye neqela lophuhliso, iworkshop enkulu ye-GMPC yokuvelisa, izixhobo zanamhlanje ezizenzekelayo ngokupheleleyo, kunye nobonelelo lwamazwe ngamazwe. ikhonkco lokungeniswa kwemathiriyeli ekrwada. Ngoku iye yaba yinkampani eyaziwayo yeemveliso zokuthambisa kushishino lwezithambiso, iphume eyayo ibhrendi KILLFE. Ukuba ujonge abavelisi bezinto zokuthambisa abachwephesha kunye nabathembekileyo be-OEM, wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi.
Iminyaka eyi-16 yamava kwindawo yeCosmetics.
Inkampani eqinisekisiweyo enezatifikethi ezininzi.
Inkonzo yokumisa enye kubathengi bethu.
Nazi iindaba zamva nje malunga nenkampani yethu kunye neshishini. Funda ezi zithuba ukuze ufumane ulwazi oluninzi malunga neemveliso kunye neshishini kwaye ke ufumane inkuthazo yeprojekthi yakho. Sikholelwa ngamandla ukuba kufuneka sifunde ukuba ulusu olulungiswe kakuhle lunokufikelela kwizinto ezininzi ongazange ucinge ukuba unokuzifumana.
IiPaleti zeHolide eziPhezulu zaMaso kwiBanffee Makeup
Uluhlu olumangalisayo lwee-eyeshadow palettes zeholide eBanffee. Ngaphandle kwemibala emihle kunye ne-shades, kukho ezininzi ...
Imveliso entsha yeBanffee
——Elandela iimveliso ezisisiseko zokhathalelo lolusu, u-Banffee usungule iimveliso ze-makeup zesiseko ezineentshukumo ezininzi ukwandisa umgca wemveliso osele ukho...
I-Lip Liner ecacileyo-Ukugcina iLipstick yakho icocekile yonke imini
Njengayo yonke imveliso yokwakheka, i-lip liners ecacileyo yenza ubomi bube lula. Ziziphi iingenelo zayo kwaye iyithintela njani i-smudgi...
IiNzuzo zokuLungelela koMlebe weNdalo kunye nendlela yokuKhetha elona Luhlengezelo lweNdalo lweLip lweNdalo
#Eyona gloss yendalo yomilebe lunyango lokwenyani lwemilebe yomntu eqhekekileyo neqhekekileyo. Cofa apha ukuze wazi ukuba ziluncedo njani...
Indawo yokubeka i-Highlighter ebusweni?
Inyathelo ngenyathelo kwindawo yokubeka i-highlighter ebusweni kwaye usebenzise i-highlighter ukwenza ngcono ibunzi lakho, izidlele kunye neempumlo ...
Yeyiphi i-Lipstick eyiyeyona ilungele ukusetyenziswa yonke imihla?
Hayi, masiqhubeke sinxibelelana!
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu,
uzive ukhululekile ukufikelela kwiqela lenkonzo yabathengi.
Guangzhou Banffee Cosmetics Co., Ltd. yasekwa ngo-2015. Sigxile kuphuhliso, uyilo, imveliso, ukuthengisa kunye nokubonelela ngezothambiso zobugcisa obuphezulu.
zive ukhululekile UKUQHAGAMSHELANA NATHI
Idilesi: Igumbi 307, isakhiwo 4, No. 4, Greenland Airport Centre, Huadu District, Guangzhou